China New Style Lace Up Breathable Anti Slip Zapatillas Vehivavy Lehilahy Sneakers Chunky Ho An'ny Vehivavy 2021 Famokarana sy Orinasa | JIAN ER
Vokatra amidy ambony
2021 Fomba vaovao fividianana vehivavy ambony amin'ny Unisex ...
Vehivavy malaza tsara aina, vehivavy tia kiraro, ...
OEM ODM Custom Winter Climbing Trekking Boots Top Qu ...
Modely maodely Custom Sneaker Baloncesto Schuhe Spor ...
Designer avo lenta Anti Slip plush kiraro ankle Ki ...
New Style Custom Vehivavy Fanatanjahan-tena kiraro lamaody lamaody ...
New Style Original Custom Logo Anti Slip Zapatillas ...
Fomba vaovao manjaitra miaina anti slip slip Zapatillas W ...
Fahatongavan'ny olom-bolo azo sintomina Zapatillas mahazatra kiraro mihazakazaka ...
Sneakers mitaingina tendrombohitra avo indrindra amin'ny ririnina mihaza T ...
China Wholesale Oem / Odm Mandeha Lehilahy lamaody Po ...
China mpamatsy lehilahy Lady mahazo aina Jogging Flat Bre ...
Lace Up Mandehandeha Milina Maivana Athletic Snea ...
Kiraro mpamatsy kiraro Custom Logo Zapatillas Departivos ...
Kiraro mahazatra Fitaovana mandeha an-tongotra kiraro hazavana ...
2021 Jian Er New Arrival Oem Odm Service Unisex Whit ...
China Kids ivelan'ny trano fivarotana mafana ankizy ...
China Factory Simpe Styles vehivavy ivelan'ny trano Spor ...
Fomba vaovao mamelatra fofonaina anti-slip Zapatillas vehivavy lehilahy Sneakers Chunky ho an'ny vehivavy 2021
All-match maivana mesh breathable vehivavy clunky kiraro kiraro mahazatra, JIAN ER Shoes Company style vaovao vokatra lady kiraro Recommended. Ny ambony dia vita amin'ny lamba, Suède ary hoditra artifisialy. Ny ambony kosa dia afaka miaina sy milamina, marevaka amin'ny hoditra ary mifanentana amin'ny tongotra, miaraka amin'ny fikitika malefaka sy ny volony, tsy feno entana na maimbo, endrika miloko ambony matevina, fomba tsotra sy lamaody. Ny famolavolana ny voditongotra dia mora apetraka ary esorina. Dantelina lamaody, fanitsiana maimaimpoana ny tery. Ny tokana dia vita amin'ny ...
Toerana niandohana: Fujian, Sina
Loko / Logo / Size: Namboarina
Serivisy: OEM, ODM
Taratasy fanamarinana: BSCI
Kalitao: Fanaraha-maso 100% alohan'ny fandefasana
Ny mesh maivana lalao rehetra dia azo tsofina kiraro mahazatra kiraro kiraro kambana vehivavy, JIAN ER Shoes Company lamaody vaovao vokatra kiraro vehivavy Recommended. Ny ambony dia vita amin'ny canvas, Suède ary hoditra artifisialy. Ny ambony dia miaina sy milamina, marevaka amin'ny hoditra ary mifanentana amin'ny tongotra, miaraka amina fikitika malefaka sy volon-koditra, tsy miloko na maimbo, endrika miloko ambony matevina, fomba tsotra sy lamaody. Ny famolavolana ny voditongotra mora apetraka ary esorina. Dantelina lamaody, fanitsiana maimaimpoana ny tery.Ny tokana dia vita amin'ny fitaovana EVA sy fingotra, tsy slip, tsy mahazaka, mahazaka aina ary marefo, ary mahazo aina sy malefaka amin'ny tongotra. Ny sehatra Retro, manalalaka ny vokatry ny tongony, ary manova ny tsipika ny tongony amin'ny fomba hendry. Toetra mampihetsi-po, manenjika ny toetran'ny arabe. Izy io dia mety amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny akanjo isan-karazany, ary tsy misy fihenjanana ny fitafiana. Misy fotsy, mavokely, mainty, mifanaraka amin'ny zavatra ilainao isan-karazany. Fotsy, tsotra sy marobe, mpanampy tsara ho an'ny fanatrehana isan'andro. Pink ary tanora ary mahafatifaty, ary tena ilaina amin'ny fiantsenana sy mampiaraka. Retro mainty ambany, tovovavy kely milay.
Lamba / OEM
MD + fingotra / OEM
36 - 39 #
Antoka 5 volana
Pair / miloko / fomba 500
USD $ 100 / Piece
Fotoana fitarihana ohatra
Andro fiasana 15
Andro fiasana 60
JINJIANG JIAN ER SHOES dia naorina tamin'ny 2006 ao amin'ny tanànan'i Jinjiang any Shina. Manana mihoatra ny 15 an-taonan'ny traikefa amin'ny kiraro. Ny varotra sy ny ekipa matihanina dia manome anao serivisy manokana avo lenta. Manolotra izahay serivisy fanarahan-dia tokana ho an'ny mpanjifa manerantany. Manana departemanta R&D manokana izahay hikarohana fitaovana vaovao sy teknolojia vaovao, endrika vaovao no anaovana santionany. Misy mihoatra ny5.000 ny endrika aseho ao amin'ny efitrano fampirantiana, dia avy amin'ny famokarantsika avokoa. Isan-taona dia mamoaka manodidina izahay500-1000 fomba vaovao ho an'ny mpanjifanay, manana ozinina kiraro miaraka aminy izahay 200 mpiasa. Manarona faritra mihoatra ny 6000 metatra toradroa izahay dia mamokatra kiraro kiraro mahazatra, kiraro mahazatra, kiraro fihazakazahana, kiraro fanatanjahan-tena, kiraro ivelany, kiraro baskety, kiraro kitra, baoty, kapa. Toy ny milina fanapahana solosaina, milina fanjairana solosaina, milina boaty mitambatra mandeha ho azy, sandry mekanika mandeha ho azy, sns.
Teo aloha: Fahatongavana Vaovao Ravoravo Zapatillas Kiraro manao kiraro mihazakazaka Sneaker ho an'ny lehilahy vehivavy
Manaraka: New Style Original Custom Logo Anti Slip Zapatillas Sneakers ambony ambony ho an'ny lehilahy
Kiraro fanatanjahan-tena marika
Kiraro Sneakers mahazatra
Kiraro fanatanjahan-tena mahazatra kiraro fanatanjahan-tena mahazatra
Kiraro mahazatra China
Kiraro fanatanjahan-tena lamaody zazavavy
Kiraro fanatanjahantena modely farany
Sneaker mahazatra vaovao
Vehivavy Sneakers mahazatra
Amin'ny maha orinasa manana traikefa 15 taona dia hiasa mafy kokoa izahay
5f, Xindongsheng Building, Chendai Town, Jinjiang City, Fujian Province, Sina, kaody postaly: 362211